'लकडाउनमा किसानलाई झनै उपेक्षा' : मधुमाया जि.सी. - साक्षी खबर 'लकडाउनमा किसानलाई झनै उपेक्षा' : मधुमाया जि.सी. - साक्षी खबर
जेठ १५, २०७७ | ५२७४ पटक पढिएको
गोरखा जिल्लाको एउटा गाउँबाट श्रीमान् जागिरे रहेको जिल्लामा आउने क्रममा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१८ हेमन्तपुरमा कृषि पेशा सञ्चालन गर्दै आएकि मधुमायाँ जि.सी.लाई लकडाउनले ठुलो छटपटिमा पारेको छ । वि.सं. २०६४ साल देखि नै व्यवसायीक पशुपालनलाई अंगाल्दै आएकि जि.सी.ले लकडाउनको दुई महिनामा मात्रै कम्तिमा २ लाख रुपैया बराबरको क्षति भयो । गोलभेडामा रोग लागेर करिव ३ क्वीण्टल खाडलमा पुर्नुपर्यो । लकडाउनका कारण बंगुरका पाठा विकेनन्, माउलाई दानाको अभावले बचाउनै मुस्कील भएको छ । यसैले समस्त किसानहरुका पात्र मधुमायाँ पछिल्लो अवस्थामा सरकारको कृषि नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनकै भनाइमा कृषिलाई निर्यातमुखि बनाउने अभियान किताबका पाना र नेताका भाषणमा मात्र छन् । लकडाउनमा पनि कृषिपेशालाई सरकारले व्यवस्थीत गर्न सकेन । किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन । जिल्लाका विभिन्न भागमा किसानहरुमा देखिएका समस्या, सरकारको ऋण अनुदान नीति तथा स्थानीय सरकारको कृषि प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार खेमराज रिजालले समग्र किसानका प्रतिनिधिपात्र मधुमाया जि.सी.सँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
१. कसरी लाग्नुभयो, कृषि पेशामा ?
– मैले वि.सं. २०५१ सालमा प्युठानमा छँदा नै नेपालगञ्जमा पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिम लिएर बसीरहेकी थिए । यो क्षेत्रमा केहि काम गर्ने सोंच थियो । यसै प्रसंगमा वि.सं. २०६४ सालमा घर अघि बनाएको एउटा सेफ्टी ट्यांकीको ढलानमा बंगुर पाल्ने सोंच बनाए । त्यो बेला सेफ्टी ट्यांकि माथि २ वटा बंगुर पाल्यौं । जिल्लामा बंगुरपालनको सुरुवातीका दिन थिए, ती । कमाई लगानी अनुसार राम्रै भयो । त्यसमा श्रीमानले पनि सहमती जनाउनुभयो । त्यसपछि विसं २०६४ सालदेखि व्यवसायीक रुपमै अलिधेरै बंगुर ल्याएर थप व्यवसायीकरण गर्ने सोंच बनायौं । अनि केहि वर्ष अघि आरविसि पशुपंक्षि फर्म दर्ता गरेरै बंगुर पालन सुरु गयौं । किनकि मैले ५१ सालमा नेपालगञ्जमा तालिम लिंदा मैले बंगुरको दानापानी, प्रसुती सेवा लगायत स्वास्थ्य सेवा पनि कसरी गर्ने भन्ने सिकेकी थिएं । त्यसैले सुरुमा म बंगुर पालन पेशामा जोडिएं । क्रमश बाख्रा पालनलाई पनि केहि साइडजब जस्तै बनाउंदै टर्कि, फाइटर र लोकल कुखुरा समेतको व्यवसायीक पालन सुरु गर्दै आएकि छु । पछिल्लो समयमा मुलुकमा कोरोनाको लकडाउन सुरु भएसंगै बेमौसमी टमाटर खेती पनि गरें, तर यो वर्ष मेरो व्यवसायीक वर्ष हुन सकेन्, लकडाउनसंगै म जस्ता धेरै किसानहरु बर्वादीको अवस्थामा छौं ।
२. के–कस्ता अप्ठेराहरु व्यहोरी रहनुभएको छ, लकडाउनको समयमा ?
– खल्तीमा पैसा छैन, घरको स्टोरमा दाना सकिएको छ । बंगुर व्याएर पाठापाठी बग्रेल्ती लडिरहेका छन् । पाठा बिक्रि हुने समयमा नभएपछि आमाको दुधले पुगेन, दर्जनजति पाठा मरिसके, अरु पनि दुव्लाएर मर्ने अवस्थामा छन् । विक्रि हुने भनेको रुकुम, प्युठान र बुटवल थियो, तर लकडाउन भन्दै यस अघि आउने व्यापारी लिन आएनन्, हामीलाई पुर्याइदिन भनेका थिए, तर लकडाउनमा हामीले पाठापाठी त्यहाँ पुर्याउने अवस्थानै रहेन । अहिले खोरमा २५ माउँ, २ वटा भाले, ३ वटा छतुराछतौरी र ६३ वटा बच्चा छन् । पौष्टिक दानापानीको अभावले बच्चाहरु मृत्युको संघरमा रहेका छन् । अर्को समस्या पनि कृषि पेशामा थपिएको छ । तीन कठ्ठामा लगाएको टमाटरले बजार पाएको छैन । तुलसीपुरमा कन्ट्याक्ट गर्यो, दश रुप्पे किलो दिए लैजान्छौं भन्छन्, त्यसले मुल्य उठ्ने अवस्था पनि छैन ।
सुन्छु यो मेरो मात्र समस्या होइन, देउखुरीमा त तरकारी नविकेर झनै समस्या छ रे । यस्तो बेलामा पनि बारीमा रहेको तरकारीलाई उपभोक्ताको भान्सा सम्म सहज रुपमा पुर्याउन सरकारले किसानलाई कुनै सहुलियत दिन सकेको छैन । बरु राता, निला, सेता प्राइभेट कारमा अहिले विचौलियाहरुले तरकारी खेरेर गाउँमा लगेर बेचिरहेका छन् । किसानले पाउने मुल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मुल्यमा आकाश जमिनको फरक छ ।
Picture: Madhumaya G.C.
३. यसको मतलब, सरकार किसानहरुका समस्यामा कत्तिपनि गम्भिर छैन र सहयोग गर्न पनि तयार छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
– हो, मैले यत्रो फर्म सञ्चालन गरेको दश वर्ष भयो, मैले प्रदेश सरकारबाट एक पटक खोर सुधारका लागि तीन लाख रुपैंया जति अनुदान पाएकि हुं, तर सबै व्यवसायीक किसानहरुले त्यहि पनि पाउन सकेका छैनन् । झोलामा कृषि फार्म खोलेका सुकिला मुकिला नेताका आसेपासेले कृषि कर्मका नाममा लाखौं अनुदान लिएको पनि मैले सुनेकि छुँ । जसको नेताहरुसँग पहुँच हुन्छ, उसले बैंकबाट न्युन ब्याजदरमा कृषि ऋण पनि पाएकै हुन्छन् । तर खोर र बारीमा वास्तविक रुपमा कृषि कर्म गरिरहेका म जस्ता पहुँच बाहिरका किसानलाई न मन्त्रालयले पत्याउँछ, न बैंकहरुले । यो संस्कारबाट वाक्क भएर मैले मलाई अनुदान चाहिएन, तर किसानलाई दिइने सहुलियत ब्याजको ऋण त दिनुस भनेर धेरै पटक कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि धाएं, तर पहुँच नहुनेलाई कहिले यो भएन त कहिले त्यो भएन भनेर पन्छाइन्छ । सहुलियत ऋण वास्तविक किसानले पाएको अवस्थै छैन ।
कृषि मोटरलाई विद्युत छुट गर्ने सरकारको नीति छ भन्ने थाहा पाएर विद्युत कार्यालयमा पनि धाएं, तर त्यहाँका हाकिमले पनि स्थलगत अनुगमन गर्दा पत्याउनुभएन, भन्नुभो यहाँ त पशुपालन पनि जोडिएको रहेछ, यस्तोमा विद्युत छुट गर्न मिल्दैन । कस्तो नीति हो, यो सरकारको ? सरकारलाई मेरो एउटै आग्रह छ, यदि नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउनु छ भने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्दछु । सक्नुहुन्छ, किसानलाई सहुलियत दिएर स्वाभिमानी बनाउनुस्, होइन भने खोलामा बगाइदिनुस्, यो पीडामा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्न ।
४. यो त पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक चरित्र र लकडाउनको समस्या भो, समग्रमा तपार्इ एउटा किसान भएका नाताले सुरुवाति दिनमा कमाइ कस्तो थियो ?
– नढाँटी भन्नुपर्दा हामी परिवारका तीनैजना सदस्य र एक जना सहयोगीले यो व्यवसाय गरिरहेका छौं । यसबाट तीन छोराछोरीको खर्च कटाएर वार्षिक ६ लाख रुपैंया सम्म बचत समेत गरेका थियौं । यो अघिल्लो वर्षसम्मको शालाखाला आम्दानी हो । तर यसमा हाम्रो चार जनाको दैनिक ज्याला जोडेका छैनौं । तैपनि हामी उत्साहित थियौं । मुलुकमा संघीयता आएपछि केहि आशा पनि पलाएको थियो । वडा सरकारले पशु सुत्केरी भत्ता पनि पोहोरसाल देखि दिन थालेको थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१८ ले एउटा बंगुर व्याएको अवस्थामा सुत्केरी भत्ता भनेर ६ सय रुप्पे दान र एक बोरा दाना दिने पनि गरेको थियो । तर यो वर्ष दिएको छैन । वडामा जाँदा लकडाउनपछि भन्दै पठाइने गरेको छ ।
तैपनि मैले भारतका विभिन्न शहरहरुमा दैनिक ज्यालामज्दुरी गर्न, तथा भारतीयहरुको कोठिमा काम गर्न जानेहरुलाई यहिं कृषि कर्ममा लाग्न आग्रह गर्दछु । यहाँ आफ्नोपन पनि हुन्छ, कमाई पनि हुन्छ ।
५. कुन सन्दर्भमा अपनत्वको कुरा गर्नुभो ?
– देख्नुभएन र ? हिंजोआज भारतीय सीमा नाकामा हजारौं नेपालीहरुलाई खेदेर दशगजामा अलपत्र छाडिएको । अहिले ती नेपाली दाजुभाईमा कति छटपटि होला । न रोजगार, न उपचार । कम्पनीबाट धपाएर नाकामा ल्याएर अलपत्र पारिएको मैले हिंजोको टिभि समाचारमा देखें । सायद उहाँहरु आफ्नो घर फर्कन चाहनुहुन्छ । उहाँहरु हाम्रै घरछेउको स्कुलमा क्वारेन्टाइनमा बस्दै हुनुहुन्छ रे । उहाँहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह के छ भने, उहाँहरुको घर पछाडी पनि बाँझो जमिन होला, काल्नाकाल्नी होलान्, चारमुरी धानफल्ने खेत पनि होला, खुर्सानी रोप्ने करेसाबारी पनि त होला ! गर्न सके, यहींको जमिनमा अझैपनि सुन फलाउन सकिन्छ । हेर्नुहोस् ! मैले यो भिरालो जमिन भाटेर बराबर गराएको एक वर्षपछि टमाटर खेती गरें । मौसमको खरावी र हावाहुरीले केहि नोक्सान भयो, यो प्राकृतिक प्रकोप हो, सधै यस्तो हुँदैन । उहाँहरुलाई मेरो एउटै आग्रह के छ भने तपाइले घर अघि बाँझो बारी छाडेर भारतीयहरुको गुलामी गर्न नजानुस्, महिनामा दशहजार कमाउन कुनै बाह्र बज्दैन । तपाईहरु सायद केहि दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दै हुनुहुन्छ होला, यहाँ तपाईको कोरोना उपचार पनि हुनेछ । घर फर्केपछि मजदुरी र ज्यालादारी गर्न कहिल्यै विदेश नजाने प्रण गर्नुस्, मैले तीन कठ्ठामा ६ लाख कमाउन सक्छु भने तपाइले पनि सक्नुहुन्छ, सरकारलाई सबै मिलेर घच्घच्याउंला, वास्तविक किसानलाई सहुलियती ऋण र अनुदानको माग गरौंला ।
६. अन्तमा आम पाठक, किसान र उपभोक्ताहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
– सबैभन्दा पहिले मलाई किसानका समग्र समस्या हुँदाहुँदै पनि कृषि एउटा आकर्षक र नभईनहुने पेशा हो भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा साक्षी खबर अनलाइनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसपछि वर्तमान कोरोनाको महामारीमा भएको लकडाउनले नेपाल सरकारलाई पनि एउटा पाठ सिकाओस भन्ने चाहन्छु । समस्या अझै धेरै हुन सक्ने छन् । जेठ असार अनिकालको पनि महिना हो । यहाँ उत्पादन नगर्ने भारतले कारणवस नाकाबन्दी गर्यो भने के गर्ने ? लकडाउनले यो पाठ पनि सिकाएको छ भन्ने बुझ्नुहोला । खेतबारी बांझो नराखेर खेतीपाती गरे दालरोटी र तरकारीका लागि नेपालले दशकौं सम्म विदेशको आशा गरिरहनुपर्ने छैन ।